Showing newest posts with label Dictionary. Show older posts
gtalk english-myanmar dictionary
သိပြီးသားလဲ ဖြစ်မှာပါ . မသိသေးတဲ့သူများအတွက် ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ် အရင်က အကောင့်ရှိပြီးသားလူများအတွက်တော့ မလိုပါဘူး . gtalk ကနေ english-myanmar dictionary ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ en2mm11@mmgeeks.org ကို gtalk မှာ သူငယ်ချင်းတွေ add သလိုပဲ add လိုက်ရုံပါပဲ . meaning မသိရင် english လို ရိုက်လိုက် myanmar language ကို translate လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် . ရေးချင်တာတော့ အများကြီးပါ . ၀ဘ်ဆိုက်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကမှ စကိုင်ဖြစ်သွားလို့ပါ . အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်
ရေးသားသူ ညီနေမင်း at 6:01 AM 8 ဦး မှတ်ချက်ရေးသွားခဲ့တယ် .
ဒါကတော့ shout box မှာ ညီလေး သူရိန် တောင်ထားတာပါ (ကိုညီနေမင်းခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီး Thai2English Dictionary လေး တင်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ ယိုးဒယားစကားလေ့လာချင်လို့ပါ။ ကူညီပါဦး ခင်ဗျာ။) ကဲ့ ညီလေး သူရိန်ရေ ညီလေးလိုချင်တဲ့ Thai2English Dictionary လေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီး Dictionary သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူးနော် Thai ဘလောတွေကို ဝင်ဖတ်တဲ့အခါ ကိုသိချင် Thai စာလုံးကို အဲ့မှာထည့်ပြီး English လိုပြောင်းလို့ရပါတယ် Mobile အတွက်ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် လိုချင်ရင်အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Mobile အတွက် Download ifile.it | Download mediafire @NYINAYMIN